Dibana neZotero, umncedisi wophando lomntu-u-Ikkaro
yokuqalisa >> software >> Zotero, uMncedisi woPhando lwaBantu
Zotero sisixhobo sasimahla, ekulula ukusisebenzisa ukukunceda ukuba uqokelele, ucwangcise, ucaphule, kwaye wabelane ngophando.
Inyani yile yokuba ndigcina ulwazi oluninzi kwiifomathi ezahlukeneyo, i-pdf, imifanekiso, iividiyo, amanqaku, iincwadi, njl. kwaye ndikufumanisa kunzima kakhulu ukugcina ucwangco kwaye yonke into isondele xa ndiyifuna.
Cinga ndifuna ukwenza uphando ngesihloko. Ngenye imini ndifumana iphepha kwi-pdf, elinye ndenza iifoto ezinxulumene noko, ngolunye usuku ndifumana imifanekiso kwiwebhu, ngolunye usuku ndibhala nje ezinye izingqinisiso okanye incwadi endizokuyifunda, okanye i-imeyile yonxibelelwano evela kwingcali ngalo mbandela.
Kwaye ke ngokuhamba kwexesha xa ndifuna ukubhala ngazo naziphi na ezi zihloko ndinalo lonke ulwazi olusezandleni zam.
Oku kubonakala ngathi i-priori ilula kakhulu andikhange ndikwazi ukuyicwangcisa kakuhle.
Ndizamile iindlela ezahlukeneyo. Sebenzisa i-Evernote, iPokotho, uyilo lwebhlog, kodwa yonke into ineentsilelo ezinkulu kwaye ayindisebenzeli ngendlela endisebenza ngayo.
Ukukhangela ndiyifumene iZotero, kwaye sele nditsala umsonto ngobuninzi bezinye iindlela ebendingazi ukuba zikhona.
Ngumthombo ovulekileyo https://github.com/zotero
Zotero ngaphakathi. Kusetyenziswa kwanjani
Ezi zezinye izikrini zesikrini. Kodwa ukuba ufuna ukubona ukuba isebenza njani, jonga ividiyo endiyishiye ngasentla kwaye unokufumana umbono ocacileyo
Isixhobo sahlulwe sangamacandelo amathathu. Ngasekhohlo sibona olona lwakhiwo lweefayile kunye neelayibrari zethu
Embindini okukho kwifolda kubonisiwe kwaye ngasekunene sibona idatha eyahlukileyo kunye nemethadatha yeefayile.
Ndishiya amanqaku amaninzi esiwabona kwividiyo.
Sinokongeza iithegi ukudibanisa amaxwebhu, amanqaku, njl. Njl. Phakathi kweeprojekthi ezahlukeneyo.
UZotero ungumncedisi wophando lomntu. Isixhobo sokuqokelela, ukwakha nokwabelana ngolwazi.
Kudala ndikhangela into efanayo
Ndiyishiya le vidiyo kwakhona kuba ndicinga ukuba iyasinceda kakhulu ukubona into esinokuyenza ngesi sixhobo.
Kuxhomekeka kwinkqubo oyisebenzisayo kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhuphela kunye nokuyifaka.
Ngenisa icandelo lokukhuphela kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye ukhethe inkqubo yakho yokusebenza. Uyakukhuphela i-.exe yeWindows, a .dmg ye-macOS kunye nolwandiso oluhambelanayo lweLinux
Ukongeza ekusebenzeni kwengxaki, kukho ulwandiso olukhulu lweeplagi ezisivumela ukuba songeze ukusebenza okuninzi kwaye sisebenzise zotero kwezinye iindawo.
Ke umzekelo siyabona ukuba kukho iiplagi zeWordPress kunye neDrupal. Ukudityaniswa kweLaTex kunye neTek. Ngesoftware yeenkcukacha manani efana neRStudio.
Iiplagi zokuphucula ukungenisa ngaphakathi kunye nokongeza ukusebenza kokuncamathiselo. Ihlabathi liphela elandayo ngakumbi nangakumbi.
Umdibaniso neGoogle Scholar okanye neencwadi zikaGoogle
Ngena ukuze ubone zonke plugins.
Kukuqwalaselwa kwesixhobo njengomphathi weencwadi. Ukuba ujonge umphathi wencwadi eneencwadi zakho, ithisisi, njl.njl. Ungasivavanya esi sixhobo silula.
I-ZoteroBib ikunceda ukuba wenze i-bibliografi kwangoko kuyo nayiphi na ikhompyuter okanye isixhobo, ngaphandle kokwenza iakhawunti okanye ukufaka nayiphi na isoftware. Yaziswa kuwe liqela elingemva kweZotero, isixhobo esinamandla esivulelekileyo sophando esinconyelwe ngamawaka eeyunivesithi kwihlabathi liphela, ukuze uthembele ukukunceda ukongeza imithombo kwaye uvelise iincwadi ezifanelekileyo. Ukuba ufuna ukusebenzisa kwakhona iifonti kwiiprojekthi ezininzi okanye wenze ithala leencwadi ekwabelwana ngalo, sicebisa ukuba usebenzise iZotero.
Nantsi eyakho iwebhusayithi esemthethweni
Zotero kwiLizwi nakwiLibreOffice
Enye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu ngabo bonke ababhala i-TFG yabo, ithisisi yabo, ithisisi yobugqirha, njl.
Ukudityaniswa kweZotero kunye nomhleli wethu wokubhaliweyo, nokuba liLizwi leOfisi okanye umhleli wesoftware yasimahla njengeLibreOffice isombulula ulawulo olunzima lwe-bibliographic kunye nocaphulo lolu hlobo lweprojekthi.
Yeyona nto isetyenziswayo kule projekthi. Apha siyinika ukusetyenziswa ngokubanzi, sisebenzisa lonke icandelo lolawulo lweprojekthi kunye nolwazi olungaziwa kakhulu
Ndilungiselela isifundo esithile ekufakweni nasekusebenziseni iZotero kwiLizwi nakwiLibreOffice
Isinxibelelanisi seZotero seChannel kunye neFirefox
Le iplagi okanye ulwandiso lwesikhangeli luya kubaluleka ukuba uza kuyisebenzisa kakhulu iZotero, kuba akukho nto intle njengokukhangela ifayile okanye inqaku onomdla kulo, ucofa kwi icon yesikhangeli kwaye ligcinwa ngokuzenzekelayo kwiZotero .
Khawufane ucinge iPokotho kodwa uyigcine ngaphakathi kwifolda yeprojekthi.
Kutheni iZotero hayi enye?
Ndisavavanya, kodwa ndiyikhethile kuba iyahambelana kakuhle neemfuno zam ukuze ndikwazi ukusebenza nenani elikhulu leefomathi.
Kwaye ngenxa yokuba inguMthombo oVulekileyo kwaye ndikhetha yona kwizisombululo ezizizo.
Zininzi kwaye kuya kufuneka uzifunde kwaye uzijonge. Nangona kuqala ndizilahla izisombululo ezizizo, kodwa ndibashiya kuluhlu ukuba banokukusebenzela.
Umbuzo wokugqibela X9
Olunye uhlobo oluphambili, olona lwentengiso kunye nolwaziwayo yi-Mendeley, sinokuthi singathi yiZotero engenye ye-Mendeley.
I-OKR (iinjongo kunye neziphumo eziphambili)
izigaba software Ukuhamba kwetikiti
2 Zotero ngaphakathi. Kusetyenziswa kwanjani
3 Khuphela iZotero
6 Zotero kwiLizwi nakwiLibreOffice
7 Isinxibelelanisi seZotero seChannel kunye neFirefox
8 Kutheni iZotero hayi enye?
9 Iindlela ezizezinye